पुर्व सभामुख महरा दोषी ठहर भएमा कति सजाय हुन्छ ?
Tue, Jan 28, 2020 at 3:45pm
स्ववियु निर्वाचनबारे विद्यार्थी सङ्गठनसँग छलफल #आहा खबर# शैक्षिक विकासमा समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ : डा.रामवरण यादव #आहा खबर# कोरोना भाइरस सङ्क्रमण : ‘आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन’ #आहा खबर# एभरेष्ट प्रिमियर लिगका लागि खेलाडीहरु रिलिज तथा अनुबन्धन #आहा खबर# ए डिभिजन लिग फुटबलमा सरस्वतीको पहिलो जीत #आहा खबर# पाँच रुपैयाँ जरिवाना तिर्न नसक्दा प्रहरी फन्दामा ! #आहा खबर# सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार #आहा खबर# धितोपत्र बजारः नेप्से सामान्य वृद्धि #आहा खबर# बुधबारदेखि नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक #आहा खबर# बैंकिङ कसुरमा कारागार चलान #आहा खबर# दबाब थेग्न नसकेर प्रहरीले गर्‍यो गायिका आस्था राउतलाई रिहा #आहा खबर# सभामुख सापकोटालाई आफ्नो तथा सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहन्छ– प्रधानमन्त्री ओली #आहा खबर# बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर चार रेक्टरको भूकम्प, स्थानीयवासी त्रसित #आहा खबर# राष्ट्रिय हितका आधारमा एमसिसीबारे निर्णय : प्रवक्ता श्रेष्ठ #आहा खबर# अक्षयले सारे आमिरका लागि आफ्नो फिल्मको रिलिज डेट #आहा खबर#
आईतवार, १९ असोज २०७६,	आहाखबर	2.82K
पुर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा अन्तत प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका छन् । जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जि जारी गरेपछि बालुबाटार पुगेको प्रहरीले महरालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
जिल्ला अदालतवाट पक्राउका लागि अनुमति लिएसंगै महरामाथि अनुसन्धान प्रक्रियामा अदालत पनि जोडिएको छ । प्रहरीले महरा विरुद्ध फौजदारी अपराध संहिता अनुसार मुद्दा दायर गर्ने छ । मुद्दा दायर गर्नका लागि प्रहरीले आवश्यकता भएमा अनुमति पनि लिने छ ।
महरा विरुद्ध पीडितले बलत्कारको प्रयास गरेको आरोप जाहेरीमा लगाएकी छन् । बलत्कारको प्रयास वा बलत्कार कुन आधारमा मुद्दा दायर गर्ने भन्ने बारेमा महराको र पीडित दुवैको बयानपछि निर्णय हुने छ ।
जिल्ला सरकारी बकिलको संलग्नतामा हुने अनुसन्धानमा दुवैको बयान बलत्कारको प्रयास देखिएमा सोही अनुसार महरा विरुद्धमुद्दा दायर हुने छ । बलत्कार भएको बयान पीडित रोशनी शाहीले दिएमा प्रहरीले उनी विरुद्ध बलत्कारको मुद्दा दायर गर्ने छ ।
बलत्कारको प्रयासमा तीन वर्ष कैद ३० हजार जरिवाना
महरालाई यौ दुब्र्यबहारमा मुद्दा दायर भएका अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद हुने देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २२४ अनुसार उनीमाथि यस्तो सजाय हुने छ । मुलुकी संहिताको धारा २२४मा यौन दुव्र्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ ।
उक्त दफाको उपदफा २ मा ‘कसैले आफ्नो पति वा पत्नी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरी विना करणी आशयले समातेमा वा निजको संवेदनशील अङ्ग छोेएमा वा छुन प्रयास गरेमा, निजको भित्री पोशाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा, निजले लगाउने भित्री पोशाक लगाउन वा फुकाल्न कुनै किसिमले बाधा अवरोध गरेमा वा निजलाई अस्वाभाविक रुपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा, यौन सम्बन्धी आफ्नो अङ्ग निजलाई छुुन, समाउन लगाएमा, निजसँग अश्लिल वा अन्य त्यस्तै प्रकारको शब्द मौखिक, लिखित वा साङ्केतिक रुपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा, अश्लिल चित्र वा तस्वीर देखाएमा, यौनका आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसँग अस्वाभाविक, अवाञ्चित वा अमर्या्दित व्यवहार गरेमा निजले यौन दुव्र्यवहार गरेको मानिने ’ उल्लेख छ । उक्त कार्य गर्नेलाई सजाय तीन वर्ष कैद र तीस हजार जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
बलत्कार गरेको ठहर भएमा ११ वर्ष कैद
महराले आफूलाई बलत्कार गरेको बयान रोशनीले दिइन भने महरामाथिको मुद्दामा थप सजाय हुने छ । किटानी जाहेरीकर्ता रोशनीले आफूमाथि बलत्कार नै गरेको भनेर र आवश्यक प्रमाणवाट पुष्टि भएपछि सरकारी बकिले जिकीर लिएका महरामाथि मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दुई वटा दफा आर्कषित हुने देखिन्छ । संहिताको २१९ ले जवरजस्ती करणी र २२२ ले विशिष्ट पदमा रहेको र आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत भएकाले थप सजाय हुने कुरा गर्दछ ।
मुलुकी फौजदारी संहिता २१९(३)को ङ को अनुसार पहिलो सजाय हुनुपर्ने देखिन्छ । उक्त व्यवस्थामा सात वर्षदेखि १० सम्मको सजाय हुने उल्लेख छ । महरा सभामुखको जिम्मेबारीमा रहेको र उनकै कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले आरोप लगाएका संहिताको २२२ को २ पनि थप आर्कषित हुनसक्ने छ ।
यो आर्कषित हुने कुरा सरकारी पक्षको जिकीर , पीडितको बयान र न्यायाधीशको निर्णयमा भर पर्ने हुन्छ । उक्त व्यवस्थामा आफ्नो सुरक्षा र संरक्षणमा रहेको व्यक्ति भएमा थप ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा महरा दोषी ठहर भएका १३ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने देखिनछ ।
महरामाथी शाहीले पहिलाे दिन आफुमाथि कुटपीट गरेकाे आराेप समेत लगाएकी थिइन् । बयानका क्रममा उनले कुटपीट गरेकाे भनिन भने महरामाथी थप अर्काे अभियाेग पनि लाग्ने छ । मुलुकी अपराध संहिताकाे परिच्छेद १४ काे आराेपमा महरामाथि अनुसन्धान हुने छ । कुटपीट र अङग भङ्ग बनाएकाे आराेपमा उनीमाथि थप सजाय हुने छ । कुटपीटकाे अभियाेगमा पीडितमाथि पुगेकाे क्षतिकाे आधारमा सजाय निर्धारण हुने छ ।